Complexion – Healthy Life Journal
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆောင်းရာသီထဲ ချည်းနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြေလေညှင်းတွေက အေးမြနေတာကြောင့် အသားအရေရဲ့ အစိုဓာတ်က လျော့ကျသွားပါတယ်။ ရာသီဥတုပိုမို အေးမြလာတာနဲ့အမျှ အသားအရေက ပိုမိုခြောက်လာတဲ့အပြင် ကြမ်းတမ်းတာ၊ အက်တာနဲ့ယားယံတာတို့လည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ အသားအရေ ခြောက်သွေ့မှုကို တွန်းလှန်ပါ...
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အသားအရေကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်သလဲ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့က တကယ်ခက်ပါတယ်။ အလုပ်၊ မိသားစုနဲ့ လူမှုရေး တာဝန်တွေကြားမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အသားအရေက ခြောက်သွေ့တယ်၊ နွမ်းနယ်တယ်၊ အပြစ်အနာအဆာတွေ ထင်လွယ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပါပဲ။ အကြောင်းကတော့...
ဆယ်လ်မွန်ငါးစားခြင်းကြောင့်ရရှိသော အသားအရေလှပမှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူး
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဆယ်လ်မွန်ငါးက ဈေးကွက်ထဲမှာ ပေါပေါများများမတွေ့ရပေမယ့် အဆင်သင့်ရနိုင်တဲ့ ငါးသေတ္တာဗူးတွေအနေနဲ့တော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တချို့စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ဆယ်လ်မွန်ငါးဟင်းလျာတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါးကိုစားတာကြောင့် အသားအရေကို လှပစေတယ်လို့ဆိုကြတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိတယ်ဆိုတာကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ – ဆယ်လ်မွန်ငါးမှာ ပရိုတင်းဓာတ် အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။...
အသားအရေ တောက်ပြောင်စေရန်အတွက် တမူထူးခြားလှည့်ကွက်များ
လရိပ်မေ (၁) ရေချိုးပြီးချိန် ဒါမှမဟုတ် ရေစိမ်ချိုးပြီးချိန် အရေပြားစိုထိုင်းဆရှိနေခိုက်မှာ လိုးရှင်းလိမ်းဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ရေစိမ်ကန်ထဲမှာ ချိုးရေအပြည့်ထည့်ပြီး မရှိမဖြစ် အမွှေးနံ့သာဆီအစက် အနည်းငယ်ထည့်ကာ အမြှုပ်ထအောင်လုပ်ပြီး ရေချိုးပါ။ (၃) ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကြေးချွတ်ပေးရင် ဆဲလ်သေတွေကိုကွာကျစေပြီး အသားအရေကိုကြည်လင်စေပါတယ်။ အရေပြားကို...
သင့်အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ
၊ လရိပ်မေ ၊ သင့်အသားအရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ ရွေးချယ်ဆိုးရအောင်။ – အသားဖြူဖွေးနေလျှင် ပန်းရောင်အဖျော့၊ မက်မွန်သီးရောင်၊ ရွှေညိုရောင်၊ မိတ်ကပ်ရောင်၊ ခရမ်းဖျော့ရောင်၊ ခရမ်းရင့်ရောင်၊ နီညို ရောင်နှုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့ လိုက်ပါတယ်။ – အသားဖြူပြီး ပန်းရောင်သမ်းလျှင် ပန်းရောင်၊...
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပစေမည့် သဘာဝပစ္စည်းများ
အသားအရေလှမှ မိတ်ကပ်ပြင်ရင် ပိုကြည့်ကောင်းမှာပါ။ ဒါကြောင့် အလှအပဆိုင်ရာ အရေပြားအထူးကု ဒေါက်တာမတ်ဟူရီပြောထားတဲ့ အသားအရေကြည်လင်လှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ – အာလူး အာလူးမှာ ချက်ချင်းအရောင်ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အသားအရေကို လင်းလက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ခြံကို ကျုံ့စေနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ အာလူးကို ပါးပါးလှီးပြီး...
ဘယ်နည်းက အသားအရေပိုလှစေမှာလဲ . . .
မေး. အသားအရေလှအောင် အိုမင်းမှုတားခရင်မ်လိမ်းတာနဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါတဲ့ အစားအသောက် စားသောက်တာမှာ ဘယ်ဟာက ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါသလဲ။ နွဲ့နွဲ့လင်း၊ မန္တလေး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အသားအရေလှပဖို့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုစားတာက ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များများပါတဲ့ အသီးအနှံနဲ့...
အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့် ရှစ်မျိုး
ကျက်သရေရှိတဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် လှပပြီး ကြည့်ကောင်းတဲ့ အသားအရေက အရေးပါတဲ့ သင်္ကေတတစ်ရပ်ပါ။ အသားအရေ ကြည်လင်လှပစေဖို့ အောက်ပါအလေ့အကျင့်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) ဖုန်းကို ပုံမှန် သန့်စင်ပေးခြင်း ပါးပြင်မှာ အဖုအပိမ့်နီမြန်းမှုတွေကို သတိထားမိပါသလား။ ဒါဆိုရင် သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို သတိထားပါ။ လက်ကိုင်ဖုန်းက...
ဇနျနဝါရီ လ၊ 2019 ခုနှဈ